သားအရငျးခေါကျခေါကျရဲ့နောကျဆုံးခရီးလေးတောငျ လိုကျမပို့ပဲ နောကျအိမျထောငျနဲ့သမီးကိုကတြော့ သဲသဲလှုပျခဈြနတေဲ့ စောခူဆဲကို ပရိသတျတှဒေေါသထှကျ – Shwe Thadin
သားအရငျးခေါကျခေါကျရဲ့နောကျဆုံးခရီးလေးတောငျ လိုကျမပို့ပဲ နောကျအိမျထောငျနဲ့သမီးကိုကတြော့ သဲသဲလှုပျခဈြနတေဲ့ စောခူဆဲကို ပရိသတျတှဒေေါသထှကျ
အဆိုတျောရမှေနျ ကှယျလှနျသှားပွီဆိုတာ အခုခြိနျအထိ ဘယျသူမှ မယုံနိုငျသလိုလကျမခံနိုငျကွသေးပါဘူးနျော ။ရမှေနျက သီခငျြးတှေ ဖနျတီး သီဆိုရာမှာလညျး အရမျး တျောပွီး သူ့ကို အားပေးခဈြခငျကွတဲ့ ပရိသတျအမြားအပွားကိုလညျး အခိုငျအမာ…
ပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျ။ခုလို ရုတျတရကျ နှုတျ ဆကျသှားတဲ့ ရမှေနျအတှကျအနုပညာညီအဈကို မောငျ နှမတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေကနျြရဈသူမိသားစုနဲ့ထပျတူဝမျးနညျးနကွေ တာဖွဈပါတယျ။အခုခြိနျအထိလညျး သူနဲ့ပတျသကျပွီး ဝမျးနညျးကွောငျးတှေ…
အမှတျတရလေးတှကေိုမွတျမွတျနိုးနိုး လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာတှမှော ဖျောပွခဲ့ကွသလို တဈခြို့ပရိသတျတှဆေိုရမှေနျ ပုံရိပျတှေ နာမညျတှပေါ တကျတူး ထိုးခဲ့ကွသညျအထိ ပါပဲ ။ ရမှေနျက ဘဝကိုရိုးရှငျးစှာ ဖွတျ သနျးပွီး မာနျမာနမရှိ ရိုးသားကွိုးစားသူလေးမို့….
ပိုလို့တောငျ နှမွောတသ ဖွဈနကွေတာပါ ။အမမြေားနတေ့ဈနှဈမှာလညျး သူ ဆုတောငျးစကားဆိုခဲ့တယျ.. နောငျဘဝဆိုတာရှိခဲ့ရငျအမအေိမျထောငျရေးကံကောငျးပါစတေဲ့လေ ခပျငယျငယျကလေးထဲက ကွျောငွာနောကျခံ ကလေးသီခငျြးဆိုရငျ တှတျပီပဲတဲ့…
အမနေဲ့ အတူတူဆိုတာ အရှယျရောကျလာတော့9တနျး 10တနျးကတညျးက သီခငျြးတှရေေးအမနေဲ့တိုငျပငျ အလုပျတှကွေိုးစားအခှထေုတျလာခဲ့တာ ဖအဖွေဈသူ နာမညျကွီး တေးရေးဆရာစောခူဆဲကနောကျအိမျ ထောငျ နဲ့ ပြျောနတောကိုလညျး ပွုံးပွီး…
သဘောကနြတေဲ့သား ဖွဈခဲ့ပါတယျအဖလေညျး သူ့ဘဝနဲ့သူ သားလညျးအမနေဲ့ပြျောနပေါတယျတဲ့ စာနယျ ဇငျးတှမှောဖွထေားခဲ့တာဒါပမေဲ့ ဖခငျ ဖွဈသူကတော့ ၃၇နှဈလုံး သားဖွဈသူအား တခါမှ လာမတှပေဲ့ ပွဈထားတဲ့အပွငျ နောကျဆုံးနာရေးတောငျ…လိုကျမပို့တာကွောငျ့ လူတှေ
တအားဒေါသထှကျပွီး အကွငျနာတရားမရှိတဲ့ စောခူဆဲ အားအပွငျးအထနျ ဝဖေနျနကွေပါတယျ။ပရိသတျတယောကျက ခုလိုပေါကျကှဲထားပါတယျ“သားအရငျးခေါကျခေါကျရဲ့နောကျဆုံးခရီးလေးတောငျ လိုကျမပို့တာကတော့…
.နစေိမျ့လှနျးတယျနောကျအိမျထောငျနဲ့သမီးကိုကတြော့ ခဈြလိုကျတာမှ တုနျလို့သားသမီးခငျြးတူတာတောငျ ခှဲခွားခံရတာမြိုးလား ဒါလား မိဘသားသမီးခငျြး ခှဲခွားဆကျဆံခံရတဲ့ခံစားခကျြ ကိုယျတိုငျ ခံစားဖူးလို့ကိုယျခငျြးလညျး စာပါတယျ”..
ဒါကိုကွညျ့ခွငျးအား ဖွငျ့ စောခူဆဲ ဟာ နှလုံးသားမာ ကွောပွီး သားသမီးမတ်ေတာကို မြှမြှတတ မရှိတဲ့ ဖခငျဖွဈတယျ ဆိုတာကို သိနိုငျပါတယျ..
သားအရင်းခေါက်ခေါက်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးလေးတောင် လိုက်မပို့ပဲ နောက်အိမ်ထောင်နဲ့သမီးကိုကျတော့ သဲသဲလှုပ်ချစ်နေတဲ့ စောခူဆဲကို ပရိသတ်တွေဒေါသထွက်
အဆိုတော်ရေမွန် ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတာ အခုချိန်အထိ ဘယ်သူမှ မယုံနိုင်သလိုလက်မခံနိုင်ကြသေးပါဘူးနော် ။ရေမွန်က သီချင်းတွေ ဖန်တီး သီဆိုရာမှာလည်း အရမ်း တော်ပြီး သူ့ကို အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်အများအပြားကိုလည်း အခိုင်အမာ…
ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလို ရုတ်တရက် နှုတ် ဆက်သွားတဲ့ ရေမွန်အတွက်အနုပညာညီအစ်ကို မောင် နှမတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းနေကြ တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်အထိလည်း သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝမ်းနည်းကြောင်းတွေ…
အမှတ်တရလေးတွေကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုး လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြသလို တစ်ချို့ပရိသတ်တွေဆိုရေမွန် ပုံရိပ်တွေ နာမည်တွေပါ တက်တူး ထိုးခဲ့ကြသည်အထိ ပါပဲ ။ ရေမွန်က ဘဝကိုရိုးရှင်းစွာ ဖြတ် သန်းပြီး မာန်မာနမရှိ ရိုးသားကြိုးစားသူလေးမို့….
ပိုလို့တောင် နှမြောတသ ဖြစ်နေကြတာပါ ။အမေများနေ့တစ်နှစ်မှာလည်း သူ ဆုတောင်းစကားဆိုခဲ့တယ်.. နောင်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့ရင်အမေအိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းပါစေတဲ့လေ ခပ်ငယ်ငယ်ကလေးထဲက ကြော်ငြာနောက်ခံ ကလေးသီချင်းဆိုရင် တွတ်ပီပဲတဲ့…
အမေနဲ့ အတူတူဆိုတာ အရွယ်ရောက်လာတော့9တန်း 10တန်းကတည်းက သီချင်းတွေရေးအမေနဲ့တိုင်ပင် အလုပ်တွေကြိုးစားအခွေထုတ်လာခဲ့တာ ဖအေဖြစ်သူ နာမည်ကြီး တေးရေးဆရာစောခူဆဲကနောက်အိမ် ထောင် နဲ့ ပျော်နေတာကိုလည်း ပြုံးပြီး…
သဘောကျနေတဲ့သား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဖေလည်း သူ့ဘဝနဲ့သူ သားလည်းအမေနဲ့ပျော်နေပါတယ်တဲ့ စာနယ် ဇင်းတွေမှာဖြေထားခဲ့တာဒါပေမဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူကတော့ ၃၇နှစ်လုံး သားဖြစ်သူအား တခါမှ လာမတွေ့ပဲ ပြစ်ထားတဲ့အပြင် နောက်ဆုံးနာရေးတောင်…လိုက်မပို့တာကြောင့် လူတွေ
တအားဒေါသထွက်ပြီး အကြင်နာတရားမရှိတဲ့ စောခူဆဲ အားအပြင်းအထန် ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ပရိသတ်တယောက်က ခုလိုပေါက်ကွဲထားပါတယ်“သားအရင်းခေါက်ခေါက်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးလေးတောင် လိုက်မပို့တာကတော့…
.နေစိမ့်လွန်းတယ်နောက်အိမ်ထောင်နဲ့သမီးကိုကျတော့ ချစ်လိုက်တာမှ တုန်လို့သားသမီးချင်းတူတာတောင် ခွဲခြားခံရတာမျိုးလား ဒါလား မိဘသားသမီးချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့ခံစားချက် ကိုယ်တိုင် ခံစားဖူးလို့ကိုယ်ချင်းလည်း စာပါတယ်”..
ဒါကိုကြည့်ခြင်းအား ဖြင့် စောခူဆဲ ဟာ နှလုံးသားမာ ကြောပြီး သားသမီးမေတ္တာကို မျှမျှတတ မရှိတဲ့ ဖခင်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်..
သငျ (သို့) သငျ့ရဲ့မိသားစု သငျ့ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ဒူးနာတဲ့သူရှိပါသလား
PDF တှကေိုရိက်ခာထောကျပံ့လို့ မီးနိုကို စဈကောငျစီတပျတှေ လိုကျဖမျးနတေယျဆိုတဲ့ သတငျးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး အဖွဈမှနျတှကေို ပွောပွလာတဲ့ ဆောငျးယှနျးစံ